कारागारमा सिर्जना: अवसर कि भ्रमका कुरा ?
बिपी कोइराला मंगलबार, साउन ६, २०७७, ०८:४०
५ असार २०२१ (१८ जून, १९६४)
जेलमा लेख्न पढ्न या चिन्तनका लागि असीम समय पाइन्छ, त्यसो हुनाले बौद्धिक विकास कैदीहरुका लागि सुलभ हुन्छ भन्ने साधारण धारणा छ । झन् राजनीतिक बन्दीहरुलाई राजनीतिक विषयमा किताब लेख्ने मौका दिन्छ जेलजीवनले भन्ने पनि धारणा छ।
मलाई यी धारणाहरुको विरुद्ध अनुभव हुन लागिरहेको छ । यस्ता किसिमका धेरै धारणाहरु छन्, जो वास्तविक अनुभवको कसौटीमा चोखो सावित हुँदैनन्, तैपनि मानिसहरुको यस्तो Conservative वृत्ति हुन्छ कि एकचोटि बन्न गएको धारणालाई ऊ हतपती छोड्न सक्दैन।
धारणामा विश्वास पनि एक प्रकारको बानी हो, जसले मानव मस्तिष्कमा जबर्जस्त अधिकार स्थापित गर्छ । मलाई लाग्छ, मानिसको सबभन्दा ठूलो दासता उसको मानसिक अभ्यासगतता (बानी) हो, जसले उसको बौद्धिक स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्छ या एकदम त्यसको हरण गर्छ।
मलाई जीवनमा, जबदेखि समस्याहरुका सम्बन्धमा म दिलचस्पी लिन थालेँ, सामाजिक विश्वास या साधारण जनधारणा र आत्म अनुभवमा, अनेक अवसरमा विरोध भएको पाइरहेको छु । साधारण मान्यताले एउटा कुरो भनेको छ, जसलाई अनुभवले काटेको छ । अनुभव एउटा कुरो भन्छ, मान्यताहरु अर्को कुरो।
किनभने मान्यताहरुलाई शिक्षादीक्षाद्वारा मस्तिष्कमा यस्तरी गाडेर रोपिदिएको हुन्छ, हाम्रो मानसिक स्वभावको यस्तो अंग कि तिनका विरुद्ध प्राप्त भएको प्रत्यक्ष अनुभव पनि तिनका सामुन्ने असमर्थ प्रमाणित हुन्छन् । कमसेकम, त्यस्ता मान्यताहरु अनुभवको वेगले लोप हुँदैनन् । लाग्दछ, मस्तिष्कमा दुवै खिचातानी गर्न थाल्छन् । एउटाले अर्कोलाई कमजोर पार्छ- मान्यतालाई अनुभवले, र अनुभवलाई मान्यताले।
यस खिचातानीमा मान्छे एउटा तनावको स्थितिमा रहन्छ र उसको कार्यशक्ति शिथिल हुन्छ । उसका सामुन्ने प्रश्न उठ्छ- कुन कुरो मान्ने?
साधारण मान्यताहरुको पनि महत्त्व छ, किनभने यिनका पछि पनि, यिनका आधार पनि, सामूहिक अनुभव नै हुन्- धेरैको अनुभवहरुको जमोट जस्ता हुन् यी मान्यताहरु । हो, यस्ता पनि मान्यताहरु छन्, जसको आधार अनुभव होइन, कुनै दृष्टिकोणको आधारमा कुनै नैतिक विश्वास या धार्मिक आस्था, या कुनै सामाजिक नियम र मर्यादालाई लक्षित गरेर, हुन गएका पनि धेरै मान्यताहरु छन्।
यी दोस्रा कक्षाका मान्यताहरु पनि शिक्षादीक्षाको सामर्थ्यले हाम्रो मस्तिष्कमा गडेर रहेका हुन्छन् र तिनको विरुद्धको अनुभवको संघर्ष पनि उस्तै कठिन हुन्छ, जस्तो कि सामूहिक अनुभवको आधारमा खडा भएको मान्यताहरुका विरुद्धको संघर्ष।
मानिसले मान्यताहरुको आधारभूत पार्थक्यलाई छुट्याउन सक्दैन । उसका लागि सबै साधारण धारणा या मान्यताहरु एउटै प्रकारका जस्ता लाग्छन् । यदि कुनै सहज उपाय हुँदो हो मान्यताहरुको आधारगत भिन्नताहरुलाई छुट्याउने, तब मानिस आफ्नो अनुभवको प्राधान्यलाई स्वीकार गर्न सक्थ्यो । त्यस्ता मान्यताहरु या त अनुभवमूलक छन् या सामाजिक । मानिसले अनुभवलाई प्रधानता दिन चाहन्छ, समाजभन्दा । कमसेकम सत्य असत्यको यथार्थ ज्ञानका लागि । तर, गाहारो त यसमा छ कि कुन मान्यता सामाजिक हुन्, कुन अनुभवमूलक।
यसका साथसाथ अर्को प्रश्न उठ्छ- मानी पनि लिऊँ कि मान्यताहरुको आधारलाई छुट्याउन सकियो- यो जानियो कि कुन चाहिँ अनुभवमूलक हुन्, र कुन केवल सामाजिक । यो पनि स्वीकृत भयो भन्ने मानी लिऊँ कि अनुभवलाई प्रधानता दिनुपर्छ सामाजिक मान्यताभन्दा।
अब प्रश्न उठ्छ- व्यक्तिगत अनुभव र सामूहिक अनुभवको आधारमा विस्तार-विस्तार धेरै कालदेखि खडा हुँदै गएको मान्यताको द्वन्द्वमा कसलाई प्रधानता दिने ? यो त निर्विवाद छ कि दार्शनिक दृष्टिबाट आत्म अनुभव सर्वोपरि हुन्छ । तर, के त्यो अनुभव भ्रमपूर्ण हुँदैन र ? अरुहरुको अनुभव- विशेष गरेर धेरैको अनुभवको मुकाबिलामा आत्म अनुभवलाई किन ज्यादा विश्वसनीय मान्नु?
के कुरो लेख्न भनेर बसेँ, के लेख्तै गएछु । मेरो मस्तिष्कको असंगठनको लक्षण हो यो कि एउटा कुरो थालेर आर्को कुरालाई टिपेर एकातिर लाग्न थाल्छु म।
अँ, त म लेख्तै थिएँ कि साधारण धारणा छ कि लेख्न-पढ्नलाई ठूलो मौका पाइन्छ जेलमा । मेरो अनुभवले यो धारणा भ्रमपूर्ण छ । जहाँसम्म केवल अध्ययन गर्ने कुरा छ- पढेर ज्ञान हासिल गर्ने- मलाई लाग्छ, जेलको अध्ययनको स्थायी मूल्य बडो कम्ती छ । विचारको अभिवृद्धि विचारबाट हुँदैन- विचारलाई विस्तृत हुनका लागि त्यसले Live गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात्, जीवनमा त्यसको प्रयोग हुन सक्नुपर्छ।
किताबी ज्ञान यदि त्यसले जीवनको ठोस धरातलमा उभिन पाएन भने, आकाशे कुरो हुन्छ । त्यो ज्ञान नभएर तथ्यांक संकलन अथवा (Information) को संकलन मात्र हुन्छ । त्यस्तो अध्ययनले विचारमा दृष्टि दिँदैन । मलाई लाग्छ, विचार र जीवनमा निरन्तर विवाद (Dialogue) संलाप (कथोपकथन) भइरहनुपर्छ । यसले जीवन त समृद्धिशाली हुन्छ हुन्छ, विचार पनि पुष्ट र हेतुयुक्त हुन्छ । शुद्ध किताबी ज्ञानले पेट त भर्छ, तर पोषण त्यसबाट प्राप्त हुँदैन । अहंकार मात्रै त्यसले बढ्न जान्छ । अर्को कुरा, त्यस्तो ज्ञानको उपयोगिता सीमित भएकोले मस्तिष्कमा त्यो परिमाणमा र अधिक कालसम्म आउँदैन पनि।
जेलमा लेख्न भने सकिन्छ, समय यथेष्ट भएकोले । तर, त्यसमा पनि यसो हेरेर ल्याउँदा बन्दी जीवनबाट कति ठूलो साहित्यको सृष्टि हुन सकेको छ र मानव इतिहासमा ? जति संख्यामा मानिसहरु, ठूला-साना, जेल गए इतिहासमा, त्यसलाई विचार गर्दा उनीहरुको कलमबाट निस्केका रचनाहरुको त्यत्रो ठूलो महिमा छैन- न परिणाममा, न लेखनीको गुणको दृष्टिबाट नै।
विशेष गरेर राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई जेलमा लेख्ने कुरा नै उपलब्ध हुँदैन, यद्यपि साधारण धारणा छ- कि राजनीतिक व्यक्तिहरु जेलजीवनको मौका छोपेर लेख्ने काममा व्यस्त रहन्छन् । एक त राजनीति अत्यन्त व्यावहारिक- दिनप्रतिदिन- पेशा हो, त्यसमा दर्शन शास्त्रको जस्तो ठोकुवा कुरो या Commitment (प्रतिज्ञाबद्ध) को कुरो सम्भव छैन । यो पेशामा निरन्तर सम्झौता गरिरहनुपर्छ या गर्नमा तत्पर रहनुपर्छ । आज भनेको कुरा भोलि गलत साबित हुन्छ, र गलत साबित भएको स्थितिमा अर्कै कदम चाल्नुपर्छ । यो भन्ने अर्थ होइन कि राजनीति धोखा हो । अर्थ यो हो कि राजनीति अत्यन्त व्यावहारिक पेशा हो । त्यस्तो पेशाका सम्बन्धमा जेलमा बसेर निर्णयात्मक कुरा के लेख्ने?
त्यसैले धेरैजसो जेलमा बसेर राजनीतिज्ञहरुले इतिहास लेख्ने प्रयत्न गरेका छन् र नेहरुको Discovery of India र Glimpses of the World History या आत्मकथा।
मलाई नै परेको अप्ठ्यारो- नेपालको राजनीतिका सम्बन्धमा के लेख्ने ? कुन स्थितिमा हामी बाहिर निस्किन्छौं, त्यसको ज्ञान छैन । यस्तै अप्ठ्यारोले गर्दा शुद्ध साहित्यिक रचनापट्टि मेरो ध्यान गएको छ, कविता, कथा र उपन्यास लेख्ने प्रवृत्ति हुन्छ । राजनीतिक विषयमा हात चलाउन मन लाग्दैन।
आत्मकथा लेख्न सक्छु र नेपालको इतिहास पनि जो कि लेख्न थालेको पनि छु । गणेशमानजी भन्नुहुन्छ, वर्तमान राजनीतिमा पनि मैले एउटा किताब लेख्नुपर्छ रे । तर, मेरो अप्ठ्यारो उहाँ बुझ्नुहुन्न।
- 'जेल जर्नल'बाट
विकासबारे के भन्थे बिपी?